Madaxweynaha Puntland oo Magaalada Dhuusa-Mareeb sidiiran loogu dhaweeyay.
January 17, 2018 - Written by Suldaan Samawade
Madaxwenaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 17 Jnuaray 2018 waxaa sidiiran loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta maamulka Galmudug.
Madaxwaynaha dawladda Puntland iyo wefdigiisa ayaa waxaa halkaasi kusoo dhawayey madaxweynaha maamulka Galnmudug Axmed Ducaale Geelee Xaaf, madaxweynaha Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare, gudoomiyaha golaha fulinta ee maamulka Galmudug mudane, sheekh Shaakir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah.
Madaxwaynaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa uu ka qayb geli doonaa dhamaytirka heshiiska maamulka Gamludug iyo ahlusunna-waljamaaca kaas oo beri ka furmidoona magaalada dhuusamareeb.
Dhica kale Madaxwaynaha Galmudug oo kusoo dhaweeyey wefdiga Madaxwaynaha dawladda Puntland Magaalada Dhuusomareeb ayaa waxaa uu halkaasi ka jeediyay kelmedo soo dhawayn ah waxaana ka maid ahaa.
“halkaan waxaan maanta kusoo dhawaynaynaa Madaxwaynaha dawladda Puntland iyo wefiga uu hogaaminayo waxaan leeyahay kusoo dhawoow mudane madaxwayne magaalada dhuusamareeb oo ah maagaaladaadii hore, maanta waan kugu soo dhawaynayaa dhuusamareeb, waxay kuu leedahay xasuuas gaar ah, aad ayaan maanta kuugu soo dhawaynynaa magaalada dhuusamareeb.”
Sidoo kale madaxwaynaha dawladda Puntland oo ka hadlay goobtii soo dhoweynta ayaa sheegay inuu aad iyo aad ugu mahadnaqo Madaxda iyo shacabka reer Dhuusomareebeed ee sidsa diiran usoo dhoweeyey,
“Madaxwayne aad iyo aad ayaan kaaga mahad naqayaa adiga iyo shacabkaba dhammaantiin, soo dhawaynta qiimaha le ee aad nagu soo dhaweyseen waan ku faraxsanahy, runrii magaalada dhuusamareeb waa magaaladaydii aan ku koray, waa magaalo runtii aniga xasuus gaar ah ii leh qof walbana meesha uu ku koray waxay u leedahay xasuus agaar ah waxay u leedahay muhiimad gaar ah, markaa aad ayaan ugu faraxsanahay in aan imaado.”
waxaa iigu danbaysay 1988 mar aan reerka kusoo booqday, waan jeclaa in aan imaado hada kahor laakiin iima suurto gelin waana jeclaa runtii inaanimaado, mar walbaana niyadaan ku hayay in aan mar uun magaaladaydii kusoo laabto oo arko , weliba aan magaalada ku dhex socdo oo aan soo maro meelo badan oo magaalada ka mid ah.”
waxaan jeclaa in aan soo booqdo dugsigii aan dhigan jiray iyo iskuulkii aan dhigan jiray markaa xasuus gaar ah ayay aniga ii leedahay magaaladani.”
ayuu yiri madaxwaynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Ugudanbayn madaxwayanaha dawladda Puntland ayaa waxaa uu ku soo laaban doona magaalada Garoowe ee caasimada dawladda Puntland, kadib marka uu maalinimada berrito ah soo gebageboobo shirka uu kaga qayb gelayo magaalada Dheesomareeb.